Ibhomu ebiloqondiswe kwabe-UN liqhumele esikoleni eSomalia - Bayede News
Kuqhume ibhomu ebelicushwe emotweni ngumnikazi wayo ngaphandle kwesikole enhlokodolobha yaseSomalia lapho kufe khona abantu abayisishiyagalombili kwalimala abali-17 okuhlanganisa nezingane ezili-13.
Lesi ngesinye sezigameko zakamuva zokuqhuma okubulalayo kulo nyaka ezweni elihlaselwe yizinxushunxushu zezombusazwe kanye nesomiso. Ukuqhuma kwebhomu ngehora lesikhombisa ekuseni kuvunywe amaphekula e-al Shabaab, athe abeqonde ophikweni lwezokuphepha lwe-United Nations obeludlula eduze kwesikole.
Umkhulumeli we-UN eMogadishu wenqabile ukuphawula. Umsebenzi ongathandanga ukudalulwa uthe abekho abasebenzi bakwamanye amazwe abavela ku-UN abalimele kodwa abanalo ulwazi lokuthi abasebenzi baseSomalia bakutholile yini ukulimala.
Kuqubuke intuthu phezu kwesikole iMocaasir, lapho usilingi wekilasi uphahlazeke phezu kwamatafula abafundi, kusho abazibonele. U-Abdisalan Omar Ibrahim, oneminyak eli-13, uthe umsindo wokuqhuma uqhamuke ngesikhathi ebhala isihloko sesifundo somlando uthisha wakhe asiqale ebhodini. Lo msindo ulandelwe wukukhala kwabafundi afunda nabo njengoba izingxenye zebhilidi ziwela phezu kwabo.
“Isitina sangishaya ekhanda futhi igazi laligobhoza kumfaniswano wami,” esho. Yena nabanye abafundi abalimele baphuthunyiswe esibhedlela badedelwa bonke ngaphandle koyedwa. “Sathuthumela ngenxa yokuqhuma kwesibhamu, sabe sesivalwa ukuqhuma kwesibhamu okwalandela,” kusho uMohamed Hussein, umhlengikazi esibhedlela esiseduze sase-Osman, okhishwe emvithini yophahla oluwile.
Izithombe zevidiyo nezithombe zikhombisa izindonga ezimbili zekilasi elilodwa izicucu kanye nebhodi lokubhalela elinomusho oklwetshiwe ongashintshile. Amabhasi ezikole nezimoto kuqhunyiswe izinqwaba zezinsimbi. Okhulumela amaphoyisa u-Abdifatah Aden Hassan utshele abezindaba ukuthi idelakufa liziqhumise ngebhomu emotweni yohlobo lweSUV ebigcwele iziqhumane belibhekise kuhide lwe-UN.
I-UN inabasebenzi abaningi abasiza abantu nabezepolitiki eMogadishu. Abe-Aamin Ambulance bakhiphe okungenani abantu abangu-23 abalimele kulokhu kuqhuma, u-Abdikadir Abdirahman, umqondisi wale nkonzo, etshela abeReuters.
U-Abdiasis Abu Musab, okhulumela umbutho wezempi we-al Shabaab, ukuqinisekisile ukuthi leli qembu lenze ukuhlasela okubhekiswe kuhideyi lwe-UN. I-Al Shabaab ibilokhu ilwa nohulumeni omkhulu waseSomalia iminyaka, ifuna ukuthatha izintambo futhi iphoqelele ukutolika kwayo okuqinile komthetho we-Islamic sharia.
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, leli qembu liye laqinisa ukuhlasela kwamabhomu nezibhamu eMogadishu nakwezinye izindawo empini yalo namasosha aseSomalia kanye nombutho we-AMISOM ogunyazwe yi-African Union esiza ukuvikela uhulumeni.
Intatheli edumile yaseSomalia ibulawe idelakufa i-al Shabaab eMogadishu ngoMgqibelo. Ukuhlasela kwakamuva kuza phakathi kwezinxushunxushu zezombangazwe mayelana nenqubo yokhetho osekunesikhathi eside ibambezeleka kanye nesomiso esishubile.
Inhlangano yosizo iSave the Children ithe ngoLwesithathu cishe ingxenye yesine yabantu baseSomalia ithwele kanzima ngenxa yesomiso.